Accueil > Gazetin'ny nosy > Farafangana: Mihetsika ny fikambanana VMA
Farafangana: Mihetsika ny fikambanana VMA
Anisan’ny hetsika hoentin’ny fikambanana VMA na Viavy Mandray Andraikitra eto Farafangana mandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena hoa’ny vehivavy ny fanadiovana ny tanana sy ny fanamboarana ny kianja filalaovam-baolina eto Farafangana. Ny faharoa ny volana martsa dia nahazo fanomezan-dalana mitondra ny laharana 2018/036-CU/FA/ST.V ny fikambanana Viavy Mandray Andraikitra izay handokoana ny gradin sy ny fanamboarana ny bozaka amin’ny kianja filalaovana ka tokony ho ny dimy martsa dia hiroso amin’ny fampiasana fitaovana vaventy hanesotra ireo tany ka hahafahana miroso amin’ny fanotofana sy fanaketsana ny bozaka vao araka ny torimarika nomen’ireo teknisianina avy amin’ny kaominina araka ny fanazavana nomen-dramatoa Ndremanjary Roseline filohan’ity fikambana ity tamin’ny fampiantsoany ny mpanao gazety teny an-traniony tao amin’ny villa Soamagneva Tandrokaomby ny talata enina martsa. Gaga sy talanjona anefa ry zareo fa nisy fanakanana ny fiara vaventy hiasa ary nampafantarina an-dreo fa efa nofoanana ilay didy manome alalana azy ireo izay mitondra ny laharana 2018 /005-CU/ FA ST izay milaza fa efa nahazo famatsiam-bola avy amy CCPREAS ny kaominina hanamboarana ny asa araka ny fangatahana nalefa tamin’ny 04 janoary 2018 mitondra ny laharana 2018/001-CU/FA hoy ny lefitra voalohany amin’ny fiadidiana ny tanana eto Farafangana tamin’ny firesahana tamin’ny biraony taninhkeo ka fikambanana hafa indray no mahazo ny tsena izay efa niara niasa tamin’ny CCPREAS nandritra ny fotoana maro fa ny fandokoana ny gradin dia tohizana ihany. Malahelo izahay hoy ny filohan’ity fikambanana ity satria sady hasa fanatsarana no famoronana asa hoan’ny olona mahery ny arivo izay sandaina telo arivo ariary isan’andro. Tsy hatao mahakivy ny zava-mitranga hoy ramatoa filoha ary azo tsapain-tanana ny ezaky ny fikambanana amin’ny alalany fiompiana kisoa sy ny fambolena ananas y voamaina izay ataon’ireo mpikambana miisa mihoatra ny arivo miparitaka amin’ny fokontany latsaky ny dimampolo ato amin’ny distrikan’i Farafangana. Maro ireo foto-drafitrasa mila haorina sy havaozina ka tokony alamina fotsiny ny fitsinjarana ny asa satria tombontsoa hoan’ny tanana ihany izany hoy ireo mpanara-baovao, raha tsy hitanisa ny tranon’ny tanora izay mila fanatsarana, ny tsy fahampiann’ny kianja filalaovana baolina kitra, handball sy volley ary ny lalam-pirenena faha roa amby folo izay mbola mampikaika ireo mpandeha hatramizao
Solombavambahoaka: Hiakatra fitsarana farany eo anatrehan’ny governemanta
Androany talata faha 13 martsa 2018 no hihiboka sy hifandresy lahatra ny governemanta tarihin’ny praiminisitra Mahafaly Olivier sy ny depiote ao Tsimbazaza. Hanatanteraka asam-boamiera manokana mahakasika ny fifandresen-dahatra momba ny lalàm-pifidianana izay hifehy ny fifidianana ho filoham-pirenena sy ny fifidianana rehetra manomboka ny taona 2018 ity.
Asam-boamiera (travail de commission) no voalaza fa hataon’izy ireo amin’izany. Raha ny tokony ho izy dia ny vaomieran’ny atitany sy ny fitsarana no mandray anjara manokana amin’ity fihaonana ity ka hanao katro-doha mandinika ny iny volavolan-dalàna izay naroson’ny governemanta iny eny amin’ny Antenimierampirenena, ka ny mpikambana amin’ny vaomiera voakasika amin’izany no tokony hiara-hidinika aminy. Eo indrindra no mahagaga ny mpanaraka ny raharaham-pirenena ankehitriny satria tsy fanao loatra ny toa izao atao androany izao.
Eo amin’ny lalàna sy ny fitsipika anatiny mifehy ny Antenimierampirenena dia azo lazaina fa fandikan-dalàna tanteraka izao ataon’ny depiote sy ny governemanta izao. Azon’ny governemanta atao tsara ny mandefa teknisianina avy any amin’ny ministera voakasika ny fifidianana sy ny fitsarana raha toa ka mila izany ny depiote amin’ireo fanazavana ara-teknika raha toa ka ilaina izany. Ny ministra koa raha toa ka ilaina amin’izany dia afaka mivory miaraka amin’ireo vaomiera ireo fa tsy ny praiminisitra velively. Mbola manana ireo antsoina hoe “administrateur parlementaire” koa ny Antenimierampirenena, izay afaka manazava ny zavatra tsy mazava sy ilaina fanazavana ara-teknika sy araka ny lalàna raha toa ka mila izany ireo vaomiera ireo raha ilaina izany.
Ny lalàna koa dia mametra tsara fa tsy tokony hisy ny fifampitsabahan’ny andraikitra ny governemanta sy ny parlemantera amin’ny raharaha toa itony. Maro ny zavatra azo lazaina amin’ity raharaha ity raha ny fanarahana ny fenitra sy ny lalàna no asian-teny, saingy izao no zavatra iainana ao amin’ny andrim-panjakana roa ity izay tokony hisy fahalalahana tanteraka ho an’ny andaniny sy ny ankilany ny fandinihana izany lalàna izany.
Raha nanontanianay ny depiote avy any Soanierana Ivongo ingahy Tody Arnaud ny fahitany ny raharaha dia nilaza izy omaly alatsinainy faha 12 martsa 2018 fa tsy manaraka lalàna sy tsy fanao mihitsy izao, ka mahagaga ihany nefa io amin’ny tabilao io ny mahakasika izany ka mandehana mijery. Misy zavatra hafa angamba ao ka ho hitantsika izany ao anatin’ny fivoriana izay hataonay rahampitso talata io.
Raha niezaka nanatona ny mpampaka-teny jeneralin’ny birao maharitra ao amin’ny Antenimierampirenena, ingahy Lihahosoa Malement dia nanambara ity olona ity fa be dia be ny fanazavana ara-teknika izay ilaina ny praiminisitra hoy ihany izy ka izany no antony ilaina azy ao.
Raha tsy hijery raha tsy ireo olona roa ireo isika dia mifanohitra be ihany ny raharaha ao amin’ny Antenimierampirenena amin’izao fotoana izao.
Any amin’ny fivoriana itambaram-be no mazana no atrehan’ny praiminisitra sy ny minisitra ary ireo teknisianina isan-karazany mahakasika ilay volavolan-dalàna holaniana. Izany dia atao eo imason’ny olona rehetra te hanatrika izany. Izao nefa dia efa misy ny fihaonana mialoha sahady. Izany fihaonana mialoha izany dia mampieritreritra ihany satria niaraha-nahita ny fomba fandaniana tolo-dalàna teto Madagasikara tamin’ny repoblika fahefatra ity. Ny fividianana olona no nibaiko ireo depiote tao Tsimbazaza tao. Ny vola no mahery tao amin’ity andrim-panjakana ity. Efa lany ilay lalàna vao misy ny fiverenana amin’ny zavatra tsy nety natao, ka mamoaka lalàna vaovao indray hanitsiana izany. Nampalaza ity fanjakana ity ny fitondrana malety teny amin’ny depiote ireo isakin’ny misy fivoriana ka mifidy lalàna.
Eo ampelatanan’ny depiote tanteraka ny ain’ny vahoaka Malagasy 25 tapitrina amin’izao fotoana izao. Tompon’andraikitra amin’ny ho avin’ny Malagasy izy ireo eo anatrehan’ny firenena sy ny tantara. Iankinan-javatra maro ny fandaniana lalàna izay hataon’izy ireo momba ny lalàm-pifidianana izay efa miteraka resabe eto amin’ny firenena izao. Ho hitantsika ny mety ho vokatra ny fihaonana izay hataon’ny depiote sy ny praiminisitra androany izany.